प्रोड्युसरका दुःख कति कति - रमझम - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
लता, जसले गीत गाउन खोज्दा अस्वीकार गरियो
प्रभाकर गौतम - बुधबार मात्रै ८७ वर्ष पुगेकी गायिका लताले गीत रेकर्ड गर्न थालेको मात्रै ७३ वर्ष बितिसकेको छ। यस बीचमा उनले रचेको इतिहासको लेखाजोखा राख्न समेत हम्मे हम्मे पर्छ।
किन छुट्टियो 'सुपर कपल'?
- विश्व गुलावी दुनियाँ यतिबेला केही आश्चर्य, केही दुःखी र केही कुतुहलताको त्रिवेणीमा छ। कारण, हलिउडको सबैभन्दा ‘गोल्डन जोडी’को उपमा पाएको अभिनेत्री एन्जेलिना जोली र अभिनेता ब्राड पिटको सम्बन्ध अदालतको सँघारमा पुगेको खबर जो सार्वजनिक भएको छ।
दर्शकले 'बेवाच' हेरेपछि मलाई घृणा गर्नेछन्: प्रियंका
- भर्सटाइल बलिउट अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ाले हलिउड फिचर फिल्म बेवाचमा आफू नकारात्मक भूमिकामा देखिने बताएकी छिन्।
‘गेम अफ थ्रोन्स’ले हात पार्‍यो ३८औँ एमी
- ‘गेम अफ थ्रोन्स’ सन् २०१६ आउटस्ट्याण्डिङ ड्रामा सिरिज जित्दै सबैभन्दा धेरै एमी अवार्ड हात पार्ने सिरिज बनेको छ। ६८औँ एमी अवार्डमा सो गेम अफ थ्रोन्सले आफ्नो ३७औँ अवार्ड हात पारेको हो।
'बलिउड प्रोजेक्ट'मा रिहर्सल गर्दै सोनाक्षी
- बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा प्रतिष्ठित सङ्गीत महोत्सव 'बलिउड म्युजिक प्रोजेक्ट'मा पहिलो पटक प्रस्तुति दिने तयारीमा छिन्। इन्स्टाग्राममा तस्बिर सेयर गर्दै उनले यसका लागि रिहर्सल सुरु गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेकी छिन्।
सोफिया भर्गारा टिभीमा धेरै कमाउने नायिका, प्रियंका आठौँ स्थानमा
- ‘मोडर्न फ्यामिली एक्ट्रेस सोफिया भर्गारा टेलिभिजनमा सबैभन्दा धेरै कमाउने अभिनेतृ बनेकी छिन्। उनी पाँच वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा धेरै कमाउने अभिनेत्रीका रुपमा स्थापित छिन्। फोर्ब्सका अनुसार गएको वर्षमा उनले ४.३ करोड डलर कमाएकी थिइन्।
विदा भइन् ट्रान्सजेन्डर अभिनेतृ
- ट्रान्सजेन्डर अभिनेतृ एलेक्सिस आर्केटको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान लस एन्जलसमा ४७ वर्षीया आर्केटको मृत्यु भएको हो। उनले आफ्नो उमेर चालीस पुग्नलाग्दा लिंग परिवर्तन गरेकी थिइन्।
‘हिडल्स्वीफ्ट’को ३ महिनामै ब्रेकअप
- हलिउडको नवीन जोडी टेलर स्वीफ्ट र टम हिडल्स्टनबीच ब्रेकअप भएको समाचार छ। तीन महिनाको प्रेमसम्बन्धपछि उनीहरुको ब्रेकअप भएको हो।
आमिरलाई हलिउडभन्दा बलिउड प्यारो
- बलिउडका नायक अमिर खानले आफू हलिउडमा काम गर्न कहिल्यै उत्साहित नबनेको बताएका छन्। उनले हलिउडबाट मात्र नभएर चीन र जापानबाट पटक पटक अफर आए पनि स्क्रिप्ट मन नपरेको बताए।
भिडियो म्युजिक अवार्डमा बियोन्सेको वर्चस्व
- एमटिभी भिडियो म्युजिक अवार्ड २०१६ मा गायिका बियोन्से हावी भएकी छिन्। उनले सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार ‘भिडियो अफ दि इयर’ सहित ८ विधामा पुरस्कार जितिन्। बियोन्सेको ‘लेमोनेड’ भिडियो अफ दि इयर घोषित भएको हो।
सांस्कृतिक सम्बन्ध विच्छेदको मोडमा भारत–पाकिस्तान
पुरस्कारले डिलनको वजन बढ्यो कि नोबेलको?
बाआमाको हातबाट राजेशपायलको तेस्रो 'दर्शन नमस्ते'
नेपालखबर गायक राजेशपायल राईको चर्चित गीत दर्शन नमस्ते हिट भएपछि उनले यही नामबाट एल्बम निकाल्ने सिलसिला जारी छ। सोमबार उनको 'दर्शन नमस्ते ३' सार्वजनिक भएको छ। सोमबार उनले आफ्ना बुबा र आमाको हातबाट एल्बम सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्तो छ विनोद राईको 'पारा'
नेपालखबर नेपाली तारा सिजन—३ को उत्कृष्ट सातसम्म पुग्न सफल गायक बिनोद राईको पहिलो एल्बम ‘पारा’ सार्वजनिक भएको छ। शनिबार मण्डला थिएटरमा चिन्डो म्युजिकले आयोजना गरेको समारोहमा उनको एल्बमलाई गायक, सङ्गीतकार तथा लेखकहरु गणेश रसिक, उदय सोताङ, नवराज लम्साल,...
मिस युके नेपालको ताज पोखराकी टेनिसा रानालाई
प्रजय शुक्ल ‘कोही पनि मानिस पूर्ण हुनसक्दैन, सबैको कमी कमजोरी हुन्छ। जसले कमजोरीलाई जितेर भित्री सौन्दर्यमा निखार ल्याउँदै अघि बढ्न सक्छ उही नै साँचो अर्थमा सुन्दर हुन्छ, यो भनाइ थियो पोखराकी टेनिसा रानाको जसले उनलाई मिस युके नेपाल– २०१६ को ताज पहिर्यायो।
यस्ता छन् फ्लप फिल्मका हिट हिरोइन
नेपालखबर ग्लामरस् दुनिया न हो, पछिल्ला दिनमा फिल्म चलेर मात्र कलाकार स्थापित हुन्छन् भन्ने मान्यता भत्कदै गएको छ। रजतपटमा जसका फिल्म सुपर फ्लप भए पनि सोही फिल्मका कलाकार भने हिट भएका बग्रेल्ति उदाहरण सतहमा आएका छन्।
देवकोटाको जीवनमाथि सिक्किममा चित्रकला प्रदर्शनी
नेपालखबर सिक्किममा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी र कृतिमा आधारित चित्रकला प्रदर्शनी हुने भएको छ। साउन ८ र ९ गते नेपाली चित्रकारहरुका देवकोटा सम्बन्धी चित्रहरु प्रदर्शन हुने आयोजक देवकोटा–लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
समलिङ्गीमाथि बनेका दुई गजब फिल्म
खगेन्द्र गिरी ब्लु इज द वार्मेस्ट कलर समलिङ्गीहरुको आपसी सम्बन्धको कथा हो भने अलिगढ एक बयोवृद्ध समलिङ्गी प्रोफेसरको समाजसँगको संघर्षको कथा हो।
कमल हसन अस्पताल भर्ना, लडेर खुट्टा भाँचियो
भारतीय चर्चित अभिनेता कमल हसन चिप्लेर लडेपछि अस्पताल भर्ना भएका छन्। चेन्नईमा आफ्नै अफिसको सिढीमा चिप्लेर लडेपछि उनको खुट्टा भाँचिएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा जेनिफर लोपेजको कडा आलोचना
एजेन्सी सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा अमेरिकी गायिका/नायिका जेनिफर लोपेजको आलोचना भएको छ। उनले ह्यासट्यागमा ‘अल लाइभ्स म्याटर’ लेखेर ट्वीट गरेपछि उनको आलोचना सुरु भएको हो।
सनी लियोनले फिल्म नखेल्ने !
बलिउडकी सेक्स सिम्बल सनी लियोनले सधैं फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय नहुने बताएकी छिन्।
हङकङमा बजार खोज्दै काठमाडौँका डिजाइनर
हरेक साता पार्टी आयोजना हुने हङकङमा नेपालका चर्चित फेसन डिजाइनरहरुले बजार खोज्न थालेका छन् । हङकङको नेपाली मोडेल ऐजेन्सी सेन्स अफ क्लिकले यसको चाँजोपाँजो मिलाइदिने गरेको छ ।
दुई नम्बर ढाडे बिरालो आयो
अघिल्लो वर्ष ‘ढाडे बिरालो’ तीज गीत गाएर चर्चा बटुलेका श्रीदेवी देवकोटा र प्रकाश कटुवालले सोही गीतको दोस्रो भाग पनि तयार गरेका छन्। द्वैअर्थी शब्द र ज्योती मगरको अश्लिल हाउभाउसहितको मोडलिङबाट ‘ढाडे बिराले’ले चर्चा पाएको थियो ।
कोरियाको ब्राइडल अवार्डमा नेपाली सिम्रन
हरियानाकी गायिका हर्षीताको गोली हानेर हत्या
'म्यान बुकर प्राइज २०१७' अमेरिकी लेखक जर्ज सान्डर्सलाई